DEG-DEG: Manchester United Oo Heshiis Buuxa La Gaadhay Jadon Sancho, Lacagta Lagu Kala Iibsaday & Waqtiga Lasoo Bandhigayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Manchester United Oo Heshiis Buuxa La Gaadhay Jadon Sancho, Lacagta Lagu Kala Iibsaday & Waqtiga Lasoo Bandhigayo
DEG-DEG: Manchester United Oo Heshiis Buuxa La Gaadhay Jadon Sancho, Lacagta Lagu Kala Iibsaday & Waqtiga Lasoo Bandhigayo
June 30, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Premier League 0
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ugu dambayn si rasmi ah gacanta ugu dhigtay xiddiga reer England ee Jadon Sancho oo ay kala soo wareegayso Borussia Dortmund.
Manchester United ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay wada-xaajood toos ah oo aanay cidina u dhaxaynin kula jirtay Borussia Dortmund oo ay ka wada-hadlayeen sida ay u kala qaadanayaan lacagta ciyaartoygan ay ku kala iibsanayaan oo ay horeba dhedhexaadintii wakiillada uga sii heshiiyeen.
Sidii aanu wararkii hore idiinku soo gudbinay, labada kooxood ayay kaliya u dhinnaayeen dhamaystirka qodobbo yaryar oo la xidhiidha bixinta lacagta iyo saxeexa dhukumentiyada kala-wareegga laacibkan.
United ayaa suuqii xagaagii hore iyo midka haddaba waxa bartilmaameedka koowaad u ahaa Sancho oo ay sannad ka hor qarka u saarnaayeen laakiin saacadihii ugu dambeeyey ay ku kala kaceen markii ay Borussia Dortmund tanaasul ka samayn weyday 108 milyan oo Gini oo ay ku xidhay saxeexa laacibkan.
Sida uu hadda shaaciyey wariye Fabrizio Romano, labada kooxood ayaa heshiis buuxa oo dhinac walba ah ka gaadhay iibka Jadon Sancho, waxaanay isla meel dhigeen lacagta iyo xataa dillaalka ay siinayaan wakiillada ciyaartoyga iyo dhexdhexaadiyeyaashaba.
Labada kooxood ayaa ku heshiiyey 90 milyan oo Euro oo ay qayb yar oo ka mid ahi ku xidhnaan doonto bandhigga iyo guulaha uu ciyaartoygu la gaadho Manchester United.
Warka ayaa waxa uu intaa ku daray, in Jadon Sancho uu saxeexayo heshiis soconaya illaa 2026, si rasmi ahna loogu soo bandhigi doono isagoo xidhan dharka Manchester United isla marka uu ka gudbo tijaabada caafimaadka oo haddaba la diyaarinayo halkii uu ku mari lahaa.